I Jesoa Kristy, ilay hany fanantenana, ny fahalavoan 'ny olona sy ny drafitry ny famonjena | Apg29
Efa tamin'ny 1 Genesisy 3, isika dia mahita ny fomba ny drafitr'Andriamanitra manomboka maka endrika.
Ny takatry ny saina nitranga; Ny ny sorona zanak'ondry i Jesoa Kristy dia tonga ny anoloana. Soratra Pentateuque izy satria efa nilaza fa sorona.
1 Genesisy 3 Milaza ny menarana (devoly) mitantana ny hahazo an'i Adama sy Eva hanota amin'Andriamanitra. Andriamanitra teo aloha hoy izy tamin'i Adama tao amin'ny 1 Genesisy 2:17 "fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza ihinanana, fa amin'ny andro ihinananao azy dia ho faty." Hoy ny Baiboly ny fomba Eva nihaino ny menarana, mamitaka lainga "aza faty tokoa." ary izy nanome tao ny fakam-panahy hihinana ny voan 'ny hazo voarara, ary na dia nomen-dralehilahy tao amin'ny fakam-panahy. Sy ny fahotana, ny tsy fankatoavana an 'Andriamanitra, ka maty izy, dia maty ara-panahy, ary ankehitriny dia nijanona teo mitanjaka, hendahana.
Mino aho fa nifantoka tamin'ny fitanjahanao indrindra indrindra ny tsy fisian'ny ny voninahitr 'Andriamanitra. Romana 3:23 "Samy efa nanota ny rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra." Ao amin'ny Apokalypsy 3:18, isika dia mamaky momba ny fitanjahanao ihany koa, ary raha ny antso mba hividy akanjo fotsy ho azy hanarona ny tenany amin'ny. 1 Gen 3 dia milaza ny fomba koa i Adama sy Eva taorian'ny Fahalavoana, nandre Andriamanitra nitsangantsangana teo amin'ny saha, sy ny fomba hitany izany.
Rehefa nanontany an'Andriamanitra i Adama: "Aiza moa ianao?" Dia hamaly hoe: "Nandre Anao tao amin'ny saha aho; dia natahotra aho, satria mitanjaka. Ka dia niery. "Rehefa mamaky andinin-teny ity, isika dia mahita ny tena lehibe ny vokatry ny fahotana. Ny fiombonana eo amin'ny Masina Andriamanitra sy ny olona efa tapaka. Inona no lehibe fanaintainana torotoro io fiaraha-monina dia tsy maintsy ho nahatonga ka ho an'Andriamanitra!
Ary tsy maintsy hamorona olona izany raha tsy ary te, fa ankehitriny nataony izany. Te hanana fifandraisana akaiky amin'ny olona, ​​mifototra amin'ny safidy malalaka manokana. Io fifandraisana akaiky mamaritra Davida ao amin'ny Salamo 25:14 hoe: "Ny Tompo hobnob amin'ny izay matahotra Azy, ny fanekena izay mampahafantatra azy ireo." Toy izany no ahitantsika ny fomba fahotana nataony izay ny fahafatesana tonga amin'izao tontolo izao.
Tany Roma izahay 5:12 hoe: "Koa izany dia tahaka ny olona iray no nidiran'ny ota ho amin'izao tontolo izao sy ny fahafatesana noho ny fahotana, sy ny fahafatesana ny olona rehetra tonga tao, satria nanota avokoa."
Ny drafitr'Andriamanitra manomboka maka endrika
Efa tamin'ny 1 Genesisy 3, isika dia mahita ny fomba ny drafitr'Andriamanitra manomboka maka endrika. Hoy ny Baiboly momba ny fomba ny manome fampanantenana ny Mpamonjy ho avy, ny vehivavy taranak'i izay manondro an'i Jesosy Kristy. "Izy no hanorotoro ny lohanao," Andriamanitra hoy ny menarana. Ao amin'ny Apokalypsy 20 dia hitantsika Kristy raikitra fandresena dia ilay menarana ela, izay toy ny devoly. Avy eo dia nisy ota tamin'izao izay nampisaraka an'Andriamanitra sy ny olona.
Hitantsika ao amin'ny Pentateuque, indrindra fa ao amin'ny 3 Genesisy ny fomba mifidy ny ahitana ireo tra-boina, ankoatra ny hafa fanatitra noho ny ota sy ny fanati-panonerana indraindray Israelita mba hanonitra ny amin'ny helony. Ireo niharam-boina dia manondro fatratra Jesoa Kristy sy ny sorona noho izahay. Tamin'i Jaona nanomboka Jaona 1 milaza raha mahita an'i Jesosy "ny Zanak'ondrin'Andriamanitra," rehefa miteny ny olona izay tsara ny hevitra fa ny sorona zanak'ondry sy ny fahotana.
Ny takatry ny saina nitranga; Ny ny sorona zanak'ondry i Jesoa Kristy dia tonga ny anoloana. Soratra Pentateuque izy satria efa nilaza fa sorona. Isaia dia naminany fa ny Mpamonjy tao amin'ny Toko faha 53, "Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helotsika. Ny sazy no namelezana Azy noho ny fiadanana, ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika. Izahay rehetra nania tahaka ny ondry, samy lasa ny fomba, fa ny trosa rehetra, ny Tompo ao aminy. Nokapohina izy, nefa nanetry tena ka tsy niloa-bava. Tahaka ny zanak'ondry entina hovonoina, sy tahaka ny ondrivavy izay moana eo anatrehan'ny mpanety azy, ka tsy niloa-bava. "
Na ny 3 Mos 16 sy Hebreo 9 isika dia mamaky ny Andro Fandrakofam-pahotana lehibe, ny andro ny mpisoronabe niditra tao indray mandeha isan-taona ny Masina Indrindra ny ran 'ny fanavotana ho an'ny sy ho an'ny olona ny fahotana. Ao amin'ny Hebreo 9 dia hitantsika ny fomba Kristy indray mandeha niditra tao amin'ny Masina Indrindra any an-danitra tamin'ny rany, ka nahazo fanavotana mandrakizay. Isika navotana avy amin'ny fahotana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia tonga ny fanatitra noho ny ota! Izany dia milaza ny fomba Kristy nanatitra ny tenany tsy manan-tsiny ho an'Andriamanitra. Ny andininy faha-22 milaza fa "ny lalàna dia nanadio an'i saika ny zava-drehetra amin'ny fandatsahan-drà, ary tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka."
Tamin'ny alalan'ny nanaovany sorona ny ainy i Jesosy, niditra an-danitra tokoa mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra ho antsika. Hebreo 10:19, 20 "Ry rahalahy, noho ny herin 'ny ran'i Jesosy, dia afaka ankehitriny matoky miditra ao amin'ny fitoerana masina indrindra, ny làlana vaovao sady velona, ​​izay nisokatra ho antsika ny alalan' ny efitra lamba, izany hoe ny nofony." Ny efitra lamba tao amin'ny tempoly , dia ny aizim-efitra lamba nanasaraka ny masina avy any amin'ny masina indrindra. Raha mbola ny efitra lamba fa mbola tao, noho izany dia aseho avy hatrany fa ny lalana mankany amin'ny fitoerana masina indrindra, ho any Andriamanitra no tsy misokatra sy malalaka ho an'ny rehetra.
I Jesosy, rehefa maty teo amin'ny hazo fijaliana, dia namariparitra ny fomba triatra ny efitra lamba hatrany ambony ka hatrany ambany. Afaka miaina ao akaiky izao fiombonana amin'Andriamanitra indray, noho i Jesoa Kristy, raha toa ka mino sy manaiky Azy ho Mpamonjy sy Tompo. Koa ny Baiboly miteny amin'ny Apokalypsy 21 fa indray andro any, dia hisy lanitra vaovao sy tany vaovao, ny andro izay mihitsy no ho eo ny olona ka hitoetra tao aminy Izy. Ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka amin'ny ota ny vokany manimba, dia ho tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy ny fandresena tanteraka. Ary amin'izany andro izany dia hamafa ny ranomaso rehetra amin'ny masontsika. Tsy hisy fahafatesana intsony, na alahelo, na fitarainana, na areti-mandringana.
Fantatsika avy amin'ny 1 Korintianina 15:24, 25, fa ny andro ho avy i Kristy, dia tanteraka hanorotoro sy holevoniny, ny ratsy fanahy rehetra sy ny fahefana sy ny hery fanjakana. Ny fahavalony rehetra ho eo ambanin'ny tongony (tsarovy ny teny fikasana ao amin'ny 1 Genesisy 3 momba ny fomba ny bibilava ny loham nopotehiny ny vehivavy ny taranak'i dia i Jesoa Kristy). Verse 26 amin'ny 1 Korintiana 15 hoe: "Ny fahavalo farany fahafatesana omena ny hery rehetra."